အီရန်ကို စစ်မတိုက်အောင် ထရမ့်ကို နားချခဲ့နိူင်တဲ့သူ ??? – XB Media Myanmar
အီရန်ကို စစ်မတိုက်အောင် ထရမ့်ကို နားချခဲ့နိူင်တဲ့သူ ???
အမေရိကန် စပိုင်ဒရုန်းကို ပစ်ချတဲ့ အီရန်ကို စစ်တိုက်ဖို့ သမ္မတ ထရမ့်က အမိန့်ပေးလိုက်တာကြောင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ထိပ်တိုက်တွေ့ ဖြစ်ခါနီးမှာ ထရမ့်ဟာ သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နောက်ဆုံးမိနစ်ပိုင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး တပ်တွေ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို သမ္မတ ထရမ့်က စိတ်ပြောင်းသွားအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူဟာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ လား၊ အကြံပေးတွေပဲလား။ သူတို့ထဲက တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။တပ်ပြန်ရုပ်ဖို့ ထရမ့် ဆုံးဖြတ်ချက် ပြောင်းသွားတာဟာ ရုပ်သံ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ တက်ကာကားလ်ဆန်ကြောင့်လို့ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်က ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
ထရမ့်ဟာ သူ သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ Fox News က အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေကတစ်ဦးြ ဖစ်တဲ့ ကားလ်ဆန်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကို လက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကန်ဒရုန်းကို ပစ်ချတာအတွက် အီရန်ကို စစ်တိုက်ဖို့ အကြံပေးတွေက ထရမ့်ကို တိုက်တွန်းနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကားလ်ဆန်ကတော့ အင်အားသုံးတာဟာ ရူးနှမ်းတာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ပြောနေခဲ့တယ်လို့ သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ကားလ်ဆန်က ထရမ့်ကို အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ထဲက သဘောထားတင်းမာသူတွေဟာ သမ္မတရဲ့ အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားကြတာ မဟုတ်ဘူးလို့ နာချနေခဲ့ပြီး တကယ်လို့ အီရန်ကိုသာ စစ်ခင်းခဲ့ရင် ထရမ့်အနေနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်အရွေးခံရဖို့ကို နှုတ်ဆက်အနမ်း ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခုလို ထရမ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းအောင် ကားလ်ဆန် တစ်ဦးတည်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ သတင်းစာက ထောက်ပြပေမယ့် ကျန်တဲ့ အကြံပေးတိုက်တွန်းမှု ပြုနိုင် သူကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။
အီရန်အပေါ် စစ်ထိုးဖို့ အစီအစဉ်ကို ထရမ့် ပယ်ဖျက်လိုက်ချိန်မှာ သူဟာ အိမ်ဖြူတော်မှာ တီဗီကနေ ကားလ်ဆန်ရဲ့ တင်ဆက်မှုကို ကြည့်နေတာလို့ သိရပါတယ်။ အဲအချိန်မှာ ကားလ်ဆန်က ပြည်ပစစ်ပွဲတွေဟာ အမေရိကန်အတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ် အရေးနိမ့်မှုနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ကြောင်း တင်ဆက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ပြင်တာကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း တရားဝင် မထုတ်ပြန်သေးခင်မှာတောင် ကားလ်ဆန်ဟာ သမ္မတ ထရမ့်ကို အီရန်ကို စစ်ရေး မဝင်ရောက်ချင်လို့ တင်းခံနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟိမဝန္တာ ချီးမွှမ်းခန်း ဖွင့်နေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Writer_မောင်သံဆင့် ( Daily Hot News )
ပုရိသတွေကို အစွဲလန်းကြီး စွဲလန်းစေတတ်တဲ့ မိန်းမသားတို့၏ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းများ
ယောက်ကျားဖြစ်သူကို.ဝက်သားတုတ်ထိုးစားဖို့ အချို သတ်ခေါ်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး